ပင်လယ်နီနှစ်ခြမ်းကွဲသောနေရာကိုသုတေသီတို့တွေ့ပြီ – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Posted on September 24, 2010 September 24, 2010 by kyawkyawoo	Posted in Exodus, Musa Prophet PBUHTagged al Quran, ပင်လယ်နီ, ပင်လယ်နီနှစ်ခြမ်းကွဲသောနေရာကိုသုတေသီတို့တွေ့ပြီ, ကျော်ကျော်ဦး, Exodus confirmed by Science, Invitation to all Muslim Minorities, Moses, Moses escapre routes scientific proof, Musa, Myanmar Muslim, myanmar muslim minority, Parting the water computer modeling applies to Red Sea Escape Route University of Colorado, PbUh, religion, science
တမန်တော်မူဆာ (မိုးဇက်)နဲ့နောက်လိုက်များရဲ့ဖာရိုဘုရင်လက်ကလွတ်အောင်ပြေးတဲ့ Exodus အကြောင်းကို ကျမ်းမြတ်ကုရအန်ထဲမှာထဲမှာအတိအကျဖော်ပြထားသလိုသမ္မာကျမ်းစာထဲမှာ
များ ဟာပင်လယ်နီလို့ယူဆရတဲ့ ပင်လယ်ကြီးကာဆီးနေတဲ့အတွက်လွတ်လမ်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဖန်ဆင်းရှင်
အို-အစ္စရာအီလီမျိုးနွယ် အပေါင်းတို့၊ ပြန်လည်အောက်မေ့သတိရကြကုန် )
တရံရောအခါ၊ ငါအရှင်သည်(အသင် တို့ကူးဖြတ် လျှောက်သွား နိုင်ကြရန်အလို့ငှာ)
ပင်လယ်ကိုပင်ခွဲ၍ အသင်တို့အား ဖိရ်အောင်န်၏ အခြွေအရံတို့၏ဘေးမှကယ်တင်
တော်မူခဲ့၏။ ထို့နောက် ဖိရ်အောင်န်၏အခြွေအရံများကို ငါအရှင်သည်
ထိုအချိန် အသင်တို့သည် မိမိတို့ကိုယ်တိုင် (ဤအချင်းအရာများကို) ကြည့်နေကြ
သို့ဖြစ်ပေရာ ငါအရှင်မြတ်သည် ၎င်းတို့အား(အပြည့်အ၀) တုံ့ပြန်တော်မူခဲ့ လေသည်။
သို့ပါ၍ ငါအရှင်မြတ်သည် ၎င်းတို့အား ငါအရှင်မြတ်၏မုက္ခပါဌ်တော်များကို ငြင်းပယ်ခဲ့
ကြသည့်အတွက်လည်းကောင်း၊ ထိုသက်သေလက္ခဏာတော်များကို (လုံးဝ) သတိမမူ
လျစ်လျူရှု၍ နေခဲ့ကြသည့်အတွက် လည်းကောင်း၊
ထို့ပြင် ငါအရှင်မြတ်သည် အစ္စရာအီလီ မျိုးနွယ်ဝင်တို့အား (ပင်လယ်နီ) တစ်ဖက်ကမ်း
မှတစ်ဖက်ကမ်းသို့ရောက်စေတော်မူခဲ့လေသည်။ ထို့ နောက် ယင်အစ္စရာအီလီမျိုးနွယ
်ဝင်တို့၏နောက်သို့ "ဖစ်ရ်အောင်န်" နှင့် ထိုဖစ်ရ်အောင်န် ဗိုလ်ခြေဗိုလ်ပါ တို့သည်
မတရားပြုမူရန်လည်းကောင်း၊နိုင်ထက်စီးနင်း ပြုလုပ်ရန်လည်းကောင်း၊ လိုက်ခဲ့ကြကုန်၏။
နောက်ဆုံးတွင် ထိုဖစ်ရ်အောင်သည် နစ်မြုပ်အံ့ဆဲဆဲ ဖြစ်ခဲ့သောအခါတွင် "ကျွန်တော်မျိုး
သည်လည်း အစ္စရာအီလီမျိုးနွယ်ဝင်တို့ သက်ဝင် ယုံကြည် ကြကုန်သောရှင်မြတ်မှတစ်ပါ
းခ၀ပ်ကိုးကွယ်ရာ အရှင်မြတ်ဟူ၍ အလျင်းမရှိကြောင်း
သက်ဝင်ယုံကြည်ပါပြီ။ထို့ပြင် ကျွန်တော်မျိုးသည် "မွတ်စ်လင်မ်"အမိန့်တော်ကို လိုက်နာသော
သူတို့တွင်တစ်ဦးအပါအ၀င် ဖြစ်ပါပြီ "ဟု ပြောဆိုခဲ့လေသတည်း
။အစ္စရာအီလျီိုးနွယ်ဝင်တို့ သက်ဝင် ယုံကြည် ကြကုန်သော အရှင်မြတ်မှတစ်ပါးခ၀ပ်
ကိုးကွယ်ရာ အရှင်မြတ်ဟူ၍ အလျင်းမရှိကြောင်း သက်ဝင်ယုံကြည်ပါပြီ။
ထို့ပြင် ကျွန်တော်မျိုးသည် "မွတ်စ်လင်မ်"အမိန့်တော်ကို လိုက်နာသောသူတို့တွင် တစ်ဦး
အပါအ၀င် ဖြစ်ပါပြီ "ဟု ပြောဆိုခဲ့လေသတည်း
(ထိုအခါ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ဤသို့ မိန့်ကြားတော်မူခဲ့၏။)
ယခုမှပင် (အီမာန်သက်ဝင်) ယုံကြည်လေသလော။ အမှန်စင်စစ်သော်ကား
အသင်သည် ယခု (မနစ်မြုပ်မီ)အလျင်အထိ မထီမဲ့မြင် ပြုခဲ့ရုံမျှမက
အသင်သည် ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်း ပြုလုပ်သူတို့တွင်လည်း
သို့ဖြစ်ပေရာ ငါအရှင်မြတ်သည် အသင့်အားအသင်၏ခန္ဓာကိုယ်
ရုပ်ကလာပ်နှင့်တကွ အသင်သည် မိမိနောင်လာနောက်သားတို့အဖို့ အထိမ်းအမှတ်၊
လက္ခဏာ၊သံဝေဂရဖွယ်တစ်ရပ် ဖြစ်အံ့သောငှာ ဆယ်တင်ထားတော်မူမည်။
သို့ရာတွင် များစွာသော သူတို့သည် ငါအရှင်မြတ်၏သက်သေ၊ လက္ခဏာတော်များကို
လျစ်လျူရှု မေ့ပျောက်၍သွားသောသူများသာ ဖြစ်ကြပေသတည်း။
များကကွန်ပြူတာ မိုဒယ်များစွာ ပြူလုပ်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း၃၀၀၀ ကျော်ကရာသီဥတု
Ref:Parting the water computer modeling applies to Red Sea Escape Route
2 thoughts on “ပင်လယ်နီနှစ်ခြမ်းကွဲသောနေရာကိုသုတေသီတို့တွေ့ပြီ”
ကိုကျော်ကျော်ဦးရဲ့ ရှာဖွေတင်ပြချက်တွေက အသိပညာဆည်းပူး လိုသူများအတွက် အသိပညာဘဏ်တိုက်ကြီး တစ်ခုပါဘဲ။
(ငါအရှင်သည် မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံသော ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကို အသင့်ထံသို့ချပေးရခြင်းသည်။ အာယသ်တစ် ခုချင်းအပေါ် ဂဂနန နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် စေ့ငုံစွာ အသေးစိတ် စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြရန်နှင့် အသိအမြင် ရှိသူတို့အဖို့ တရားရယူရန်ဖြစ်သည်။) ၃၈း၂၉
Thank you for your kind comment. There were many miracles mentioned in the Holy Book as Signs from Allah SWT. Some say these are stories or legends, but now we all k now that events are actual happening in part of our history.To quote Dr Zakir Nike’s words: ” Holy Quran is not the book of Science, but the BOOK OF SIGNS”